Akanjo akanjo lava fanaovana fanatanjahan-tena vita amin'ny fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy
Akanjo lava kamotra amin'ny hatoka lava volo an'ny lehilahy lava akanjo lava, ny lamba dia vita pirinty amin'ny camouflage ary vita pirinty, ary ny lokony dia mazava sy mazava.
Palitao mitafy fanatanjahan-tena vita amin'ny lehilahy
Ankehitriny dia betsaka kokoa ny olona toy ny akanjo mahazatra, Hoodie no safidy tsara. Io Hoodie misy loko 3 io dia ahazoana aina sy tena lamaody. Ny orinasanay dia misy ny r & d, ny famokarana, ny fitaterana ary ny marika sns, izay eken'ny ekipa tsy manam-paharoa amin'ny halavany, Fahaizana sy fahatokisana.
Akanjo lava vita amin'ny vozon'ny mpiady
Izahay dia iray amin'ireo mpamatsy lehibe indrindra ho an'ny atin'akanjo mirindra eo amin'ny sehatry ny varotra akanjo an-dàlam-pandrosoana, akanjo fanatanjahan-tena, fitafiana mahazatra ary vokatra atin'akanjo mafana. Ity tank top ity dia mety tsara amin'ny fanatanjahan-tena. Mety tsara izy io, sady tsy mandady no tery ary tsara amin'ny hazakazaka sy yoga.
Palitao fanatanjahan-tena, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy, Lamba firakotra roa sosona, Fanodinana santionany sy famokarana, Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha, Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy,